Google dia manambara fandaharana fizarana fidiram-bola $ 1B miaraka aminao!
Alahady, Desambra 30, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tsy marina izany fa moka rohy fotsiny. Metacafe, rafi-pikarohana sy laharana ho an'ny horonan-tsary, dia nihoatra ny $ 1,000,000 tamin'ny vola zaraina miaraka amin'ireo mpamorona atiny. Mike dia nitatitra fa i Revver dia nahatratra ny $ 1,000,000 amin'ny vola zaraina amin'ity taona ity ihany koa. Notsikeraiko ny fanafihan'i Google an'ireo mpamatsy atiny izay mangataka fandoavam-bola amin'ny fametrahana rohy. Michael Graywolf koa manana… mandray tranokala lehibe ihany koa izy hiasa amin'ny fanaovana cave amin'ny Google Powers-That-Be. Google dia nilaza fa